केपी ओली रहँदासम्म अध्यक्षमा अरु विकल्प छैन, म महासचिवमा उठ्छु- पृथ्वीसुब्बा गुरुङ « Harekpal
केपी ओली रहँदासम्म अध्यक्षमा अरु विकल्प छैन, म महासचिवमा उठ्छु- पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
हरेकपल November 18, 2021
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशबाटै पहिलो पदाधिकारी हुने भाग्यमानी एमाले नेता हुन् । पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङ एमालेका गण्डकी प्रदेशका पूर्व इन्चार्ज पनि हुन् । हाल एमाले सचिव उनी दशौं महाधिवेशनमा माथिल्लो पदको खोजीमा छन् । सोही कारण गुरुङले आसन्न महाधिवेशनमा महासचिवमा दाबी गर्ने घोषण गरेका छन् । तर सहमतिमा नेतृत्व चयन भए उपाध्यक्ष वा उपमहासचिवमा चित्त बुझाउन सकिने संकेत पनि गरेका छन् । उनै गुरुङसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
-महाधिवेशनको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?
-एमालेले सबैतिर सर्वसम्मत गर्दै महाधिवेशनको मुखमा पुगेको छ, केन्द्रीय समिति पनि सर्वसम्मत हुने हो ?
-पार्टी एकीकरणपछि तपाईं गण्डकी इन्चार्ज हुनुभयो । गण्डकीबाट केन्द्रीय समिति यसअघि खासै राम्रो उपस्थिति छैन, अहिले के तयारी छ ?
-तपाईंको उम्मेदवारी चाहिँ केमा हुनेछ ?
-महासचिवमा धेरैजना दाबेदार हुनुहुन्छ नि, जितिन्छ चुनाव ?
-तपाईं सहमतिमा हुँदा अरु पदमा जान सक्ने भन्नुभयो, महासचिवमा तपाईंले सघाउने र उपयुक्त उम्मेदवार चाहिँ को हो ?
-ओलीसँग अध्यक्षको प्रतिस्पर्धा गर्ने अरु कोही नेता एमालेमा छैन ?
-केपी ओलीकै कारण तपाईं मुख्यमन्त्रीबाट च्यूत हुनुपर्‍यो । उनैको पक्षमा यतिसम्म खुलेर किन लाग्नुभएको ?
-मिलाउने प्रक्रिया हुँदा माओवादी केन्द्र र १० बुँदेपछि एकतामै रहेकालाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
-एमालेबाट अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, माओवादीको नेतृत्व कसले गर्ने र एमालेमा रहेका माधव पक्ष भनिएकाहरूको नेतृत्व कसले गर्छ ?
‘चाेलेन्द्ररहीत अदालत नै नेपाल बारकाे बटमलाइन हाे’- अधिवक्ता..
‘प्रधानन्यायाधीश र केपी ओलीबीच सेटिङ छ’- बिडारी
‘न्याय परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशलाई बिदाइ गरौं, संसदीय सुनुवाइ हटाउँ’
अर्थको प्रष्टोक्ति: स्यानिटरी प्याडमा कर वृद्धि भएको छैन
दशैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने तयारी